Fitsaboana ny covid-19 :: Hitarika ady ny Foloalindahy • AoRaha
Fitsaboana ny covid-19 Hitarika ady ny Foloalindahy
Eo am-pelatanan’ny Foloalindahy ny fitantanana an’ilay mandatehezana hitantanana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19. Hiitatra ny andraikitr’ireo mpitandro filaminana eto amin’ny firenena, ka tsy hijanona amin’ny fanaraha-maso ny fanajan’ny olom-pirenena rehetra an’ireo fepetra ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao fotsiny fa hisahana ihany koa ny fitsaboana ny valanaretina.
Porofon’izany ny fiahian’ ny Foloalindahy ny Ivon-toerana vaovao fitsaboana mararin’ny Covid-19 (CTC) etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, izay nosokafan’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, tamin’ny fomba ofisialy, tamin’ny sabotsy lasa teo.
Afaka handray marary hatramin’ny dimampolo sy roanjato ny CTC. Azo antenaina amin’ny alalan’izao fanovàn’ny fitondrana ny paik’ady manoloana ny valanaretina Covid-19 izao ny fitsipi-pifehezana hentitra eo amin’ireo mpitandro filaminana ao anatin’ny ady mavaivay atrehin’ny firenena. Miaramila mpitsabo sy miaramila mpitsabo mpanampy no hiasa ao amin’ny CTC etsy Mahamasina.
Ireo marary efa manana fahasarotana sy ireo misy soritr’aretina kanefa tsy afaka mihiboka any an-tranony no horaisina eny an-toerana. Efa ahitana fitaovana arifomba, toy ny famokarana rivotra sy fameloman’aina ao aminy. Manao fizahana marary ihany koa, miampy torohevitra sy fanampiana amin’ny fitsaboana ny Covid-19.
Mivoatra ny fitaovana sy fomba ampiasain’i Madagasikara amin’ny ady amin’ny valanaretina, manomboka izao, satria anisan’ny mampiavaka ny CTC etsy Mahamasina ny fisian’ny sampan-draharaha manokana mandray an-telefaonina an’ireo olona misy trangan’ aretina. Voaangon’ireo solosaina sy fitaovana nomerika manaraka toetrandro ao ihany koa ny tarehimarika sy antontan’isa momba ny fivoaran’ny valanaretina manerana ny Nosy: na ny isan’ny marary, na ireo namoy ny ainy, ireo sitrana, ireo tranga vaovao, ny tahirim-panafody sy ny sisa.
Nanamafy ny antso avo amin’ny firaisan-kinan’ny rehetra mba handresena ny Covid-19 ny Filoha, satria ilaina izany fa tsy ho vitan’ny fanjakana sy ny fisokafan’ny ivon-toerana tahaka an’itony CTC itony samirery. « Hiarahientana isika rehetra ary hiray saina handresy ny valanaretina. Tsy hanangana saina fotsy isika fa hiady hatrany. Tsy ho resin’ny valanaretina Covid-19 i Madagasikara », hoy izy, sady toy ny feno fitokisana kokoa amin’izao handraisan’ny Foloalindahy anjara andraikitra goavana manoloana ny krizy ara-pahasalamana izao.
Famatsiana :: Ho avy amin’ity herinandro ity ireo fanafody nohafarana